Si fudud ayaa looga heli karaa tareenka ka Rome, Umbria waxay ku yaboohdaa dad tiro yar iyo qiime guryo jaban oo Talyaani ah. Dabayaaqadii Sebtember ilaa Oktoobar, waad ku raaxeysan kartaa gawaarida cad-cad iyo xafladda khamriga cusub ee magaalooyinka sida Gubbio. Sidoo kale, Waxaad u tegi kartaa Perugia si loo qabto dabbaaldegga sannadlaha ee Eurochocolate. Sidaas, Umbria waxay dhamaanteed ku saabsan tahay naftaada inaad ku garaacdo meelaha waaweyn, ku raaxayso cuntada iyo khamriga ugu fiican inta lagu jiro fasaxa deyrtaaga ee Yurub. Inta lagu guda jiro safar gaaban ama dheer, waxaad ku nooshahay meel boosta-jacaylku jecel yahay, mid ka mid ah meelaha fasaxyada ugu wanaagsan Yurub.
Sawirada qadka tooska uma cadaalad falaan sixir Cinque Terre gobolka Talyaaniga. Guryaha midabka leh ee buuraha dushooda ku yaal, hareereeyeen beero canab ah, makhaayadaha maxalliga ah, iyo wadooyinka hortayada, dhammaantood waxay ka dhigaan gobolkaan socdaal cajiib ah safarka Yurub. Cinque Terre dhab ahaantii waxay ka kooban tahay 8 tuulooyinka yaryar iyo tareen tareenka isku xira dhamaantood. Tani waxay si gaar ah u sahleysaa inaad booqato mid kasta oo ka mid ah tuulooyinka ku yaal 2-3 maalmood haddii waqtigaagu kugu yar yahay. Maxaa ka fiicnaan kara tareenka ku boodbooda mid ka mid ah meelaha ugu fiican Yurub dayrta?
Heerkulku wali wuu kulul yahay badhtamaha Oktoobar, si aad u fadhiisan kartaa harada adoo ku dhex jira galaas khamri khamri laga soo qaaday beero canab ah ama dhadhamin polenta fuud ee xafladda dayrta dhaqameed. Haddii aad xiisaynayso inaad ku darto waxoogaa farxad ah iyo kaftan ah fasaxaaga deyrta ee Yurub, waad kori kartaa Monte Bre. Muuqaallada laga soo qaaday meesha ugu sarreysa waa qaar ka mid ah aragtiyaha xiisaha leh ee Lugano Bay.
Hannover waa magaalada ugu dadka badan Jarmalka, laakiin mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talo galay fasaxa dayrta ee Yurub. Magaaladan weyn waxay hoy u tahay baarkin weyn, laba jibaar baaxadda Central Park ee New York. Geedaha geedkii hore iyo a haro qurux badan waxay ku yaalliin garoonka beeraha, ku habboon socodka iyo dayrrada caajisnimada dayrta.
Marktplatz Old Town iyo munaaradda saacadu waa bar bilow weyn oo lagu ogaanayo dhismaha Gothic. Waad usii gudbi kartaa hoolka wanaagsan ee New Town Hall, dhisme-weyn oo-boqortooyo u eg-oo dhaafsiinaya haro. Dhulka cagaaran iyo geedaha ayaa ku wareegsan qasriga weyn waxayna buuxiyaan jawiga weyn iyo muuqaalka midabada dahabka ah.
Hannover waa mid ka mid ah jawharadii Jarmalka mana noqon karo mid qurxoon dayrta. Haddii aad qorsheynayso fasaxa deyrta ee Yurub, markaa Hannover waa meesha ugu wanaagsan ee safarka loo aado. Dalxiisayaal badan maahan sixirkooda wali, sidaas darteed, waxaad noqon kartaa kan ugu horreeya ee noloshaada ku leh magaalada.
Dooxada Rissbachtal iyo Karwendel Alpine Park, waa safar aad u qurux badan oo safarka Australia ah oo loogu talagalay fasaxa deyrta. Dhulka Alpine ee Ahornboden wuxuu leeyahay 2,000 sano jir geedaha Sycamore-Maple oo u muuqda si layaab leh labiskooda deyrta ee dahabka iyo oranjiga. Dabeecadda iyo buuraha waxay abuuraan muuqaal gabi ahaanba cajiib ah oo loogu talagalay meel lagu xusuusto socdaal dhicitaan oo Yurub ah.
The Qolka Chambord waa 2 saacado koonfurta Paris waxaadna ku tababaran kartaa safarka Paris Austerlitz ilaa Blois-Chambord. Hal saac iyo badh gudahood, Waxaad ku wareegi doontaa guriga wanaagsan.
Jardiinooyinka iyo aragtida badan waxay bixiyaan aragtiyo raaxo leh ee magaalada oo dhan iyo nawaaxigeeda. dayrta aragtida ayaa si gaar ah u qurux badan midabyada dayrta. Sidaas, halka Luxembourg ay tahay magaalada ugu yar Yurub, waxay si sharaf leh u taagan tahay magaalooyinka waawayn ee waaweyn sida Paris. Xaqiiqdi waa runtii in lagu xusho Luxembourg fasaxaaga Yurub ee deyrta.
Thanks to adeegyada tareenka horumarsan, waad u safri kartaa meel kasta oo ka mid ah Yurub waqti la'aan. Laga soo bilaabo magaalada weyn ee isku-dhafka ah ilaa magaalada yar ee la yaabka lahaa, magaalo walbana annaga ayaa saaran 10 magaalooyinka ugu fiican ee fasaxa dayrta ee Yurub, waxay leedahay soo jiidasho iyo sixir u gaar ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Fasaxyada Fasaxa Ugu Fiican Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
bestfalleuropedestinations Bestfallvacationeurope dheellitirka Beeritaanka Yurub traintraveleurope